आज संविधान दिवसको चर्चा छ । असोज ३ गते अहिलेको संविधान जारी गरिएको दिन हो । संविधान दिवशको अवसरमा दलाल संसदीय व्यवस्थाका मतियारहरुले आजको दिनलाई उत्सवको रुपमा मनाउछन । यो कुनै नयाँ कुरा होइन । किनकी दलाल संसदीय व्यवस्थाकै संरक्षण गर्ने संविधान भएको हुनाले पनि । दलाल ,भ्रष्ट,माफिया,वलात्कारी,चोर ,गुण्डागर्दी गर्नेहरुको सुरक्षा कवजका लागि यो संविधान जारी छ । यदि उनीहरुले यसको गुणगान गाएनन् र उत्सव मनाएनन् भने जीवनभर सराप नै लाग्छ होला । यसलाई आश्र्चाय मान्नु पर्ने कुनै कारण छैन ।
अव यसमा ध्यान दिनु पर्ने पक्ष के छ भने यो संविधान जारी भए देखि नै सडकमा विरोध प्रर्दशनहरु पनि जारी नै छन । यो संविधानले उत्पीडित क्षेत्र,जनजाती,आदिवासी,थारु,दलित महिला,अल्पसंख्यक मधेसी लगायत सर्वहारा श्रमजिवी वर्गको प्रतिनिधित्व गरेको छैन । उनीहरुका मागलाई वन्दुकले दवाईएको छ । वाहिर प्रचारमा विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनिन्छ । संविधान सभाले वनाएको भनिन्छ । संघीयता,समावेशीता,र धर्मनिरपेक्षता भएको संविधान भनिन्छ । यी सवै– सवै जनता ढाँट्ने भम्र वाहेक अरु कुनै सत्यता छैन । किनकी नेपाली जनतालाई राम्रो संग थाहा छ संविधान सभाका सदस्यहरुको ताली हान्ने वाहेक अरु कुनै भूमिका यो संविधान वनाउनेमा छैन । संविधान अन्तै वाट ड्राफ्ट तयार भएर आयो । त्यसैमा पनि प्रमुख दलका ४ मुख्य नेताले सहमति गरेर संविधान सभामा पेश गरि संविधान सभाका सदस्यहरुलाई तालि हान्न लगाएका थिए । यस लाई संविधान सभाले वनाएको मानिदैन । निश्चित वर्गको स्वार्थको लागि निश्चित नेताले वनाएको संविधान हो । यो जनताका प्रतिनिधिले वनाएको संंविधान होइन । आम नेपाली जनताको संविधान पनि वन्न सकेको छैन ।
प्रतिक्रियादी संसदीय दलाल व्यवस्था भनेको साम,दाम,दण्ड भेद प्रयोग गरेर सत्ता र शक्तिमा जाने व्यवस्था हो । नेपालमा दलालहरुले यहि विधि अपनाएका छन । अझै माओले त संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु वच्चे व्यवस्था हो भन्नु भएको छ । यो कुरा वर्तमान केपी प्रचण्डको दलाल सरकारले अंगिकार गरेको छ ।
वेला –वेला जनतालाई चिल्ला कुरा गरेर राम्रो संंविधान ल्याएकाछौ भनेर ढाँटिरहेको इतिहाँस ताजै छन । वि.स. २०१५,२०१९ र २०४७ सालको संविधान जारी हुदा पनि यस्तै गरिएको थियो । अझै २०४७ सालको संविधान त अपरिवर्तनीय छ । विश्वको सर्वोत्कृष्ट हो । यो कसैले पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन भनेर कराउने यीनै केपी ओली ,माधव नेपाल , सेर वहादुर देउवा लगायत संसदवादी दलका नेताहरु हुन । त्यो वेलाका संविधानहरु किन ? खारेज भए त ! जनताको गुणगान गाउदै राम्रा वाक्य लेख्दै जनता लुटने संविधानहरु के हुदा रहेछन त ? अन्ततः जनताको तागत वाट खारेज भए ।
२००७ साल देखि जनताले संविधान सभा मार्फत आफ्नो संविधान आफै वनाउने सपना देखेका थिए । १० वर्षिय जनयुद्ध र १९ दिने जनआनदोलनको वलले जनताको जनविरोधी ०४७ सालको संविधान खारेज भयो । राजतन्त्रको अन्त्य भयो । नेपाली जनता संविधान सभाको पहिलो चुनावमा ०६४ सालमा सहभागी भए । तर विडम्वना जनताका प्रतिनिधिलाई संविधान लेख्न दिएन । देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी र दलाल संसदीय व्यवस्थाका नेताका कारण संविधान सभा नै भंग गरियो । फेरी जवर्जस्त अर्को संविधान सभाको चुनावको मन्चन गरियो । संविधान सभा गठन पनि गरीयो । यो संविधान सभाको नाममा नेपालमा २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएको घोषणा गरियो । संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको संविधान नामकरण गरियो ।
अहिले आएर यो संविधान वाट जनताले के पायो ? जनताको मानवअधिकार तथा मौलिक हल अधिकार कत्ति स्थापीत भयो ? दलाल संसदीय व्यवस्थाले जनताको हितमा काम गर्यो या गरेन ? भन्ने कुरा व्यवहारत जनताले प्रष्ट देखिसकेका छन । राजा मात्र हटाईएको छ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता भनेर नाम दिएको छ । आखिर जे जति लेपन लगाएपनि वर्तमान संविधानको सार चरित्र भनेको दलाल पूजीपती वर्गको सेवा र संरक्षण गर्नु नै हो । यो संविधानले श्रर्वहारा श्रमजिवी तथा उत्पीडित जनताको सेवा गर्न सक्दैन । त्यसैले ०४७ साल भन्दा अगाडी वनेका संविधानको सार चरीत्र र अहिलेको संविधानको सार चरित्र एउटै हो भन्ने कुरामा नेपाली जनता भ्रमित हुनु हुदैन । छैनन् पनि । यो संविधानले निमला हत्याकाण्ड,सुनकाण्ड,वालुवाटार जग्गा काण्ड,एकसेल राजस्व छलि काण्ड, रुकुम हत्याकाण्ड, ह्वाइट वोडि काण्ड,गोकुले काण्ड, यति काण्ड,आदि काण्डै –काण्डका दोषिहरुको खोजि गर्न सकेन । उल्टै यस्ता काण्ड गर्नेहरुको यो संविधान र यसका संचालकहरुले संरक्षण गरिरहेका छन । राम्रो काम गरेको चर्चा कमाएका र जनमत वटुलेका कुलमान घिसिङलाई विधुत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्ति नगर्नु र चुनाव हारेका वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य वनाउनु पनि वर्तमान संविधान दलाल संसदीय व्यवस्थाप र तिनीका संचालकहरुको दोष हो । कम्युनिष्ट सरकार भनिएको छ । २ तिहाई वहुमतको धम्की दिने गरिन्छ । यसको वलमा आफै संविधानको धज्जी उडाउने र उल्लंघन गर्ने काम भएको छ ।
संविधानले सुनिश्चित गरेका स्वतन्त्रता,समानता, शान्तीपूर्ण विचार राजनीति प्रवाह गर्न पाउने अधिकार यो सरकारले खोसेको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता माथि अंकुस लगाएको छ । अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै हिडेको छ । हत्या,हिंसाको वाटो आफै लिएको छ । देश फेरी पनि द्धन्द्ध तिर लैजाने खेल सरकारले खेलेको छ । नेकपाको नेता अदालतले छोडेने आदेश दिन्छ फेरी पक्राउ गरि देशभर घुमाइरहको छ । यस्ता सरकारका क्रियाकलापले यो सरकार निरंकुश र अधिनायकवाद तिर हावी भएको जनताले आभास गरेका छन । न्यायपालिकाको निर्णयलाई लात मारिरहेको छ ।
आफैले जन्माएको छोराको आफैले हत्या गर्ने आमा कस्तो हुन्छ ? आज नेपालमा त्यही भएको छ । आफैले वनाएको संविधानको उल्लंघन पनि आफै गरिरहेका छन । पछिल्लो समय कोरोनाका नाममा लुटतन्त्र र भ्रष्टाचार मौलाएको छ । संवैधानिक निकायमा कार्यकर्ता भर्ति गर्ने काम भएको छ । न्यायलयमा पनि कार्यकर्ता भर्ति गर्नै होडवाजी छ । राष्ट्रियता सवंैभन्दा कमजोर छ । विदेशी हस्तक्षेप वढेको छ । यस्ता कुरामा सरकारको ध्यान छैन । लिपुलेक लिम्पियाधुरालाई नक्सामा राख्नु ठुलै उपलव्धि वुझेका छन । यो पनि जनताको दवावले राखे । अझै भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्नेछ । हिजो महाकाली वेचर खाने,गण्डकी कोषि वेचेर खानेहरुले देश फिर्ता ल्याउने केवल कोरा कल्पना मात्र हुन्छ ।
देश राजनीतिक,सामाजिक ,साँस्कृतिक तथा आर्थिक रुपमा निकै कमजोर अवस्थामा छ । भएको संविधान र तत्सम्वन्धिका कानुनहरु कार्यान्वयको अवस्था अझै कमजोर छ । स्वयक्षाचारी तरिकाले सरकार काम गरिरहको छ । यसअर्थ दलालवर्गका लागि वर्तमान संविधान मालामाल छ । हाँसी हाँसी उत्सव मनाउन सक्छन । तर एक छाक खान नपाएर आत्महत्या गर्ने जनता र भोक –भोकै सडकमा भौतारिने जनताका लागि यो हाँसो र उत्सव होइन फाँसो छ । मसाल वालेर विरोध प्रर्दशन गर्नु पर्ने वाध्यता छ । दलाल,भ्रष्टाचारी,राष्ट्रघाती,वलात्कारी,माफिया, चोर,गुण्डागर्दी गर्नेको लागि संरक्षक छ भने सर्वहारा श्रमजिवी हुदा खाने वर्गको लागि यो संविधान काल छ ।
सर्वहारा श्रमजिवी तल्लो वर्गको लागि वर्तमान संविधान उत्सव होइन विरोध प्रर्दशनमा वदल्नु पर्छ । यो उत्सव दलालपूजिपति वर्ग र उनको जुठो पुरो खाएर मोटाउने चम्चाहरुका लागि हो । कसैको जुठोपुरो खाएर कसैलाई आत्मशान्ति मिल्छ भने मिलहोश । यो सचेत नेपाली जनतालाई होइन । यो संविधान नेपाली जनताको पक्षमा हुन सक्दैन । देशभर एकथरी नयाँ संंविधान वनाउनु पर्छ भनिरहेका छन भने अर्कोथरीले संविधान संसोधन गर्नु पर्ने माग गरिरहेका छन । संसदीय व्यवस्थाका दलालहरुले दुवै कुरा गर्न चाहादैनन् । आफ्नो स्वार्थ गुम्न सक्छ भनृेर । जनताको माग त्यत्तीकै आएको होइन अधिकार विहिन भएरनै सडकमा आवाज आएको हो । इतिहाँसको निमार्ता जनता नै हुन । यस्तो संविधान र व्यवस्था खारेज हुनु पर्छ । जनताको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हुनुपर्छ । दलालहरुको हाँसो र जनताको फाँसो संविधान खारेज गरौं । अधिकार सम्पन्न सवै नेपाली जनताको नयाँ संविधान निमार्ण गरौं ।
एमसीसी खारेजीको आन्दोलन गर्ने युवा संगठनको निणर्य
रनवेमा बँदेल छिरेपछि राँझा विमानस्थलभित्रको झाडी फाँडियो